Ultimate Guide The meelo Yoga Best Italy ee | Save A tareenka
Home > safarka tareenka Italy > Ultimate Guide The meelo Yoga Best Italy ee
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee ku saabsan Italy sida caga fasax ah waa in ay wax aad si fudud u xoqin off liiska baaldi ma. Inaad Italy mar kale iyo mar kale oo weli ku noqon karto kamana dhergi doonaan dadka dalkan picturesque iyo delicious tikidhada, hana caajisaan ay taariikhda iyo dhaqanka.
Kaasi waa soo jiidashada ee jawharad Mediterranean this dal oo bixiya ku dhowaad nooc kasta oo fasax aad ka xusuusan karto. Hagaha joogo diiradda saari doonaan dalal yoga Talyaani. laakiin, xataa haddii aad ku socoto, waayo, dib u gurasho yoga a, waa adag tahay in ay iska indha inta kale ee yaabab Italy ee.
Cuntada waxaa iska cad socday soo galay tan iyo markii diiradda cunnada ay Talyaani waa kuwa ugu wanaagsan dunida iyo dalka sidoo kale waa meel caan ah kuwa xiiso fasaxyada, Kuliyadda. Gobollada buur iftiin weheliso soo jiidasho Xeebaha sidoo kale Italy a caga caan waayo, fasaxyada baaskiil, in aan ku xuso hamiday in surfers badan qabno, waayo,.
In 2017, a record-breaking 60 milyan oo dalxiisayaal booqday dalka. Italy waa sida meel fasax loo jecel yahay, maxaa yeelay, laba sababood oo waaweyn. First of dhan, quruxda dabiiciga ah ee ku dhow kasta iyo magaalo kasta oo gobolka on ciidda Talyaani waa cajiib ah. Waxaad leedahay canab ah xaqse kuraha qoraxdu, buuraha breathtaking, iyo sidoo kale badan oo xeebaha la cabsado goobaha galida iyo tuulooyinka kalluumaysiga soo jiidasho, taxadiri taariikhiga jeestay.
Isagoo ka hadlayay taariikhda, this dhab waa sababta labaad ka dhigaya Italy sida a meel weyn in ay u safraan. gobol kasta, magaalada iyo magaalada wax yar loo armuu taariikhda. Sida dhibic-upka of Boqortooyada Roomaanka, Italy la kara in ay yihiin gogol ilbaxnimada. The qarniyo soo dhaafay ayaa sidoo kale ku daray dhaqan kaco of farshaxanka iyo dhaqanka oo dhan magaalooyinka waaweyn ee dalka Talyaaniga. In kooban, aadan karaan is halkan caajisaan.
Waxa kale oo weyn oo ku saabsan Italy? Maxaa yeelay, dalku ku soo jiray mideysan halkii ay goor dambe iyo gobollada ayaa in ka badan ama ka yar waxaad fartaan si gooni gooni ah, waxaa jira dhowr cuisines degaanka, kasta distinctively ka duwan kan kale. Taas macnaheedu waxa aad leedahay badan oo dhadhankiisu iyo isku dayaya ka hor!
The Best Meelo tagidda samee Yoga ee Italy
Tuscany waa gobolka cajiib ah in Italy iyo mid ka mid ah loola doondoonay-dib markii ay dalxiisayaal. Ma ahan oo kaliya cuntada dalka ee gobolka-gaar ah oo ka dhigaysa qof walba dareemi sida ay yimaadeen jannada ku, waxa kale oo ay ka indhaha u gaar ah iyo goobaha dabiiciga cajiib ah. The buuraha yar yar iyo dooxooyinka halkan abuuro views qeybalay, laakiin waxa ay sidoo kale goob ku haboon agagaaraha, kuwaas oo Tuscany badan.
Sidaa darteed, aad waa in aanay noqon yaabay si ay u aragto in weeynaa yoga badan oo Tuscany kale oo ay bixiyaan tours Dhadhaminta khamri, ama ay xitaa bixiya fasalo yoga iyo khamri laga bilaabo, isku ugu wanaagsan ee labada Caalamka. My talo? Tag, waayo,! raagay ayaa aad halkan dhadhamin karaa iyo baadiyaha soo jiidasho badan ee Tuscany noqon doonaa mid ka mid ah aad xusuus fasax ugu quruxda badnaa abid.
Milan in ay Tareenadu Siena
Florence si Tareenadu Siena
Perugia in Tareenadu Siena
Rome si ay Tareenadu Siena
Sardinia waa gobol kale oo caan ah markii ay booqaneysay Italy, iyo sabab wanaagsan. Its xeebaha xaqse waxa ay taasi iyadaa u jecel labada yogis iyo surfers tan iyo markii ay bixisaa badan oo isticmaalo wanaagsan, laakiin sidoo kale meelo cajiib ah, taas oo inuu fikiro ama samayn qorraxdu salaanta.
Tani waxay jasiiradda weyn ku dhowaad leeyahay 2,000 kiilomitir oo xeebta ah, laakiin gudaha ayaa sidoo kale waxay bixisaa gobollada buuraleyda ah oo fara badan wadooyinka hortayada, haddii ay tani sidoo kale ka mid ah danaha yahay. Sidoo kale, sida magaca jasiiradda ay tilmaamaysaa, cusub kalluunka iyo badda waa deeqsi halkan, sidaas oo ubbooyinku dhadhan aad sidoo kale u noqon doono dawayn.
gobolka Ragusa The weli waa mar kale meel jecel yoga ee Italy iyo sidoo kale ugu jecel yahay surfer ah ee sida fiican u (tan iyo markii uu ku yaal jasiiradda Sicily). Laga soo bilaabo yoga ku saabsan xeebta si ay u istaagaan-up yoga taki, waxaad ka heli kartaa wax walba oo aad doonayso ee yoga iyo biyo ciyaaraha iyo wax kasta oo u dhexeeya. Tababbar Yoga in Ragusa shuban doono baytariyada aad, gaar ahaan haddii aad u booqato dabayaaqadii xagaaga marka neecaw waa kaamil iyo qorraxda waa ka tur.
Messina in Tareenadu Ragusa
Syracuse in Tareenadu Ragusa
Taormina in Tareenadu Ragusa
Palermo si ay Tareenadu Ragusa
xeebta Amalfi ma aha oo kaliya marsada ah ee sahaminta cuntada delicious ama ku riyaaqayaa isboortiga biyo maalinta oo dhan, laakiin sidoo kale a iyadaa ugu jeceshahay waayo, yogis dunida oo dhan. The crystal-cad biyaha Azure iyo neecaw qabow u sameeyo haboon oo keliya ku saabsan dhaqanka wax yoga aad ka xusuusan karto, ka salaanta qorraxda in fadhiyada meditation iyo xataa yoga qoob ka.
No booqasho Italy iska cafisaan yaa kartaa Rome sida caga safarka ay weheliyaan aad faahfaahin. Trevi Isha, ah Vatican, Roman Forum, Chapel Sistine ah ay saqafka cajiib ah oo Colosseum yihiin laakiin dhowr ka mid ah dalka durkiya khasab tahay in aad aragto halka.
Inkasta oo ay tahay caasimadda, 'The City weligeed ah "sidoo kale waxa uu leeyahay badan oo meelo xasilloon oo ku wareegsan, taas oo si hufan waa sababta weeynaa yoga ee Rome waa sidaas oo caan ah.
farshaxanka caasimada dunida, Florence waa riyo ii rumowday, haddaad jeceshihiin matxafyada cajiib ah iyo breathtaking Dr Makumbe naqshadaha. Kan duugga ah, dhismayaasha cad iyo waddooyinka laamiga soo jiidasho idinka dhigi doonaa inaad dareentid sida aad ku yimid riyo Renaissance a, taas oo si hufan waxa Florence waa. qubbad The halyeey iyo Uffizi Matxaf yihiin, laakiin laba ka mid ah meelaha aad u baahan tahay in ay soo booqdaan si ay si sax ah u fahmaan sababta soo nooleynta dhaqanka of Europe halkan bilaabay dhamaadkii qarniyadii dhexe.
Waxaan leeyahay qirashada in ay sameeyaan: markii aan booqday Venice, dhab ahaantii waxaan dareemay in aan noqon kartaa qof aan guri lahayn halkan oo ku faraxsan (ma xisaabiyenimo waqtiga qaboobaha, in kastoo). Waxaan ula jeedaa uma ay yareysan halganka dadka hoy la'aan, Dabcan, laakiin waxa kaliya in magaalada waa sidaas oo degan, in kasta oo ay dalxiis culus gaadiidka, in aad dareento in nabad ay weheliyaan kanaalada ay waqtiga oo dhan. Waxaan dareemay in aan seexan karin samada furan hoos halkan, iyadoo hawada yare habeenkii Talyaani hareerahayga aniga iyo caraftii badda, cunidda haraaga ah wax kasta oo ku trattorias degaanka ku wareegsan leeyihiin, oo kaliya sidaas noqon, sidaas darteed, ku faraxsan.
duni Romantic u leexiyaan, Venice waa si fudud u qurux badan oo ah waa-arko iyadoo fasax ah ee Italy. Magaalada jirkaan ayaa ku koobnayn ay jasiiradda, laakiin waxaa jira nasasho weeynaa yoga ee Venice ama ku wareegsan kuwaas oo ah oo dheeraad ah ka qaniintay ka (qaybta cusub ee magaalada, kaliya ee dhamaan buundada).
Trento in Tareenadu Venice
Italy iyo Yoga
Yoga qabatay in Italy ayaa dhawaan halkii, sida dalka ayaa noqonaya mid aad iyo aad u badan ee marsada dalxiis iyo yoga haysato nooleenta a caan, caalamka. Tan iyo markii badan oo dalxiisayaal soo socda si ay Italy raadinayso qaar ka mid ah daqiiqado naf-baadhi tayo leh iyo in ay sidoo kale waa yogis, isagoo weeynaa yoga ee Italy heli jiray tallaabada xigta macquul ah.
Maxaa yeelay, dalka waa muran caga fasax ugu caansan ee Europe, waxa macno ah ma aha in yoga, xidid ma lahayn aad u tiro badan hooyo ee Italy. Dhaqanka qabtay on si dhakhso ah oo si fiican u ah in aad hadda ka heli kartaa weeynaa yoga ee shiidaa gees kasta oo Italy.
aad diyaar u ah inay sahamiyaan Italy tahay? website ugu fiican ee Order tababartay Tigidhada Ma Save A tareenka
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog on your site, ka dibna riix halkan: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/guide-italy-yoga/ - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml oo waxaad bedeli kartaa / in ay / de ama / PL iyo luuqado badan.
Miriam is an avid world explorer and a yogi. I love exploring world cuisines and reading fiction from all over the world. When I am not busy, I expand my collection of teas and spends some time petting the neighborhood cats. - Waxaad halkan si aad u riixi kartaa ila soo xiriir
safarka tareenka France, safarka tareenka Germany, safarka tareenka Italy, safarka tareen UK, safarka Europe
safarka tareenka, safarka tareenka Austria, safarka tareenka France, safarka tareenka Germany, safarka tareenka Italy, safarka tareenka Sweden, Tareen Travel The Netherlands, Talooyin safarka tareenka, safarka Europe